Raw Palmitoylethanolamide ntụ ntụ (544-31-0) Nsukka - Phcoker
Paa Palmitoylethanolamide (544-31-0)
Raw Palmitoylethanolamide (PEA) ntụ ntụ bụ fatty acid amide, nke dị na klas nke ...... ..
ikike: 1287kg / ọnwa
Paa Palmitoylethanolamide (544-31-0) video
Paa Palmitoylethanolamide (544-31-0) Smmezi
Product Name Raw Palmitoylethanolamide ntụ ntụ
Chemical Aha Raw Palmitoylethanolamide ntụ ntụ;
Brand Name Enweghị data maka dịnụ
Klaasị ọgwụ ọjọọ Amines, Pharmaceuticals, Intermediates & Fine Chemicals
molekụla Fnhazi C18H37NO2
molekụla Wasatọ 299.499 g / mol
Nkịtị Monoisotopic 299.50 g / mol
Mgbu Point 93 ka 98 Celsius C (199 ka 208 ° F; 366 ka 371 K)
esi ebe 461.5 Celsius C na 760 mmHg
Ọkara Ndụ nke Ndụ Enweghị Data Dị
Agba White to Off-White Solid
Sume Chloroform (Sparingly), Methanol (Sparingly)
Sịkwa akwa Tigwe -20 Celsius C
Raw Palmitoylethanolamide ntụ ntụ Antinye Raw Palmitoylethanolamide ntụ ntụ bụ CB2 cannabinoid agonist na-anabata ma na-ahọrọ GPR55 agonist.
Raw Palmitoylethanolamide ntụ ntụ (544-31-0) Nkọwa
Raw Palmitoylethanolamide ntụ ntụ (PEA) bụ abụba fatty acid amide, bụ nke nọ na klas nke agonists nuklia. A na-emepụta Palmitoylethanolamide (PEA) n'ime ahụ iji merie mgbu na mbufụt. Ọtụtụ anụmanụ na osisi na-emekwapụta PEA. Enwere ike ịchọta ọnụ ọgụgụ kasị elu na lecithin soy, soybeans, akwa nkochi akwa, obere ego, na alfalfa. Akwukwo abuba a nwere ike ime ka ihe ndi noo gi nwere ike gbasaa. Uru ya na-agba ume maka nsogbu dị iche iche siri ike na-agwọ.
A gosipụtara Palmitoylethanolamide iji kee aka na onye nabatara na cell-nucleus (onye na-anabata ihe nuklia) ma na-arụ ọrụ dịgasị iche iche nke ọrụ metụtara ọrịa na mbufụ. A na-eche na isi ihe a na-akpọ proxota-profarator alpha (PPAR-α). Otú ọ dị, ọnụnọ nke Palmitoylethanolamide (na N-acylethanolamines ndị ọzọ ahaziri) bụ nke a maara iji mee ka ihe omume a na-akpọ "mmetụta zuru ezu" dịkwuo mma. E gosipụtarala Palmitoylethanolamide ntụ ntụ / PEA nwere mgbochi mkpali, mgbochi ọhụụ, neuroprotective, na ihe ndị na-akwado ya.
Dị ka mgbakwunye, PEA dị na mbadamba nkume, capsule, na ntụ ntụ. N'Itali na Spain, a na-ere PEA ka ọ bụrụ nri maka ọgwụgwọ ahụike pụrụ iche.
Papa Palmitoylethanolamide (544-31-0) Ngosipụta nke Action
Palmitoylethanolamide na-eme ka ike na-enye ume, ọkụ na-ere ọkụ, na mgbochi mkpụmkpụ PPAR. Site na ịmepụta protein a bụ isi, PEA na-akwụsị ọrụ nke mkpụrụ ndụ mkpesa na mmepụta ọtụtụ ihe ọkụkụ.
Palmitoylethanolamide na-ebelata ọrụ nke ọma na FAAH nke na-agbaji anandamide cannabinoid. Nke a na - eme ka enwee ike ịmalite ịmị ụbụrụ gị, na - enyere gị aka ịlụso mgbu ọgụ ma nwekwuo ntụrụndụ. O nwekwara ike ịmepụta ndị nabatara cannabinoid (CB2 na CB1).
Palmitoylethanolamide nwere palmitic acid na nghazi ya. Ebe mmalite maka ịme PEA n'ime ahụ bụ kpọmkwem abụm fatty acid a.
Otú ọ dị, nanị ịmụba ihe oriri nke palmitic acid ma ọ bụ abụba ndị ọzọ na-eri nri agaghị emetụta mmepụta Palmitoylethanolamide n'ime ahụ. Nke a bụ n'ihi na ahụ gị ga-eji PEA nanị ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa iji kwụọ ụgwọ maka nsị ma ọ bụ ihe mgbu, na ọkwa ya ga-adịgasị iche iche n'ụbọchị. Ụzọ kachasị mma iji nweta uru nke PEA bụ ihe mgbakwunye, ma ọ bụ ihe ọzọ na-eri nri PEA.
Iji nke ntụ ntụ Palmitoylethanolamide (544-31-0)
▪ Nchịkọta ihe mgbu
▪ Mgbochi iwe
▪ Ihe na-adịghị mma
▪ Njirimara ndị na-eji ihe akpọrọ ihe.
A na-atụ aro ntụ ọka Palmitoylethanolamide (544-31-0) Ụdị
Ọmụmụ ihe omumu ka ga-aba uru ma enwere ihe ọmụma zuru oke iji kwuo na Palmitoylethanolamide bụ ihe mgbakwunye dị mma. A naghị ejikọta mmekọ PEA ogologo oge ọ bụla na nsogbu ọ bụla. A na-eji Palmitoylethanolamide mee ihe na 300 mg na 1.8 g / ụbọchị na ọmụmụ ọmụmụ.
▪ Ma ọ dịkarịa ala, 600 mg / ụbọchị nwere ike ịdị mkpa iji gbochie ahụ mgbu ahụ, ebe a na-eji 1.2 g / ụbọchị mee ihe maka ọrịa mgbu na-arịa ọrịa shuga.
▪ Ejila 1.8 g / ụbọchị mee ihe iji belata mmerụ anya na ndị nwere glaucoma ma ọ bụ ọrịa shuga.
▪ Maka ịlụ ọgụ oyi, 1.2 g / ụbọchị bụ usoro onu ogugu.
▪ Nchịkọta zuru ezu nwere ike kewaa n'ime abụọ n'ụbọchị. Anyị na-atụ aro ka ịmalite usoro nhazi nke 1.2 g / ụbọchị na-ekewa na 600 mg n'ụtụtụ na 600 mg n'ehihie. Soro nzaghachi gị ma jiri nwayọ mụbaa usoro ọgwụgwọ mgbe ọnwa 1 gasịrị ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
A na-eji ihe nchịkọta Micronized Palmitoylethanolamide mee ihe n'ọtụtụ ọmụmụ dị elu karịa ụdị ndị ọzọ. Micronized Palmitoylethanolamide bụ ezigbo ntụ ntụ nke kachasị mma ma dịkwuo irè. A na - ejikwa Palmitoylethanolamide jikọtara ya na luteolin na ọnwụnwa na - adakarị, ọ ga - abụkwa uru dị ukwuu maka ahụike ụbụrụ.
uru nke Paa Palmitoylethanolamide (544-31-0)
Kemgbe nchọpụta ya na 1950s, ndị na-eme nchọpụta nwere mmasị na Palmitoylethanolamide. Dị ka onye na-eme ihe ike ma na-adịghị mma, Palmitoylethanolamide na-enye olileanya maka ọtụtụ ndị na-ata ahụhụ site na mgbu na-adịghị ala ala na nke neuropathic. E wezụga uru a, Palmitoylethanolamide ntụ ntụ nwere ike inye uru maka ahụike gị. Enwere ụfọdụ uru maka ịchọrọ aka:
♦ PEA Na-ebelata Mgbu na Ogbugba
♦ Enhances Health Brain and Regeneration
♦ Mma maka anya gị
♦ Nwere ike ichedo Obi gị
♦ Na-akwụsị Gut inflammation
♦ Nwere ike belata Mmetụta Mwute.
♦ Dịwaa Mgbaàmà nke Multi Sclerosis
♦ Nwere ike ịlụ ọgụ na-agwụ aghara
♦ Dịpuo Mpịpụta Mgbakọ
A na-achọpụta ihe ọhụrụ nke Palmitoylethanolamide, na-ahapụ ụfọdụ ndị ọkà mmụta sayensị mgbagwoju anya. Ọ na-apụta na Palmitoylethanolamide nwekwara ike ịmepụta ndị na-anabata cannabinoid, melite ọnọdụ, belata allergies.
Mpempe akwụkwọ Orlistat (96829-58-2)
MT2 (Melanotan-II) ntụ ntụ (121062-08-6)
Raw Lorcaserin ntụ ntụ (616202-92-7)